Ligy Arabo Mikasika An’i Gaza: “Blah Blah… Blah Blah Blah” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Novambra 2012 2:15 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, বাংলা, Français, Dansk, English
Mihaona ao amin'ny foibeny ao Kairo ny Ligy Arabo mba handinika ny momba an'i Gaza – ary tsy avy miaina ireo mpikirakira aterineto, na miandrandra vokatra tsara amin'ny mety ho fandraisana fepetra henjana.
Ilay Ejiptiana Mona Eltahawy manontany hoe :
@monaeltahawy:Fanontaniana 2 : 1. Nihaona ihany mandinika ny tranga Gaza va re ny Vondron'ireo Mpanao Jadona antsoina hoe Ligy Arabo? 2. Mbola mandefa bitsika toy ireo bandikely ao anatin'ny firahalahiana fasista ihany ve ny IDF?
Raha ny Filankevi-Pilaminan'ny Firenena Mikamba nampiatso sy nanao fivoriana maika ny alin'ny Alarobia teo [14 Nov 2012] mba hiresahana ny fanafihana an'habakabaka farany nataon'i Israely tao Gaza, ary ny vali-bontana tifitra bala afomanga avy amin'ny Hamas nankany Israely, ny Ligy Arabo kosa niandry hatramin'ny androany [17 Nov 2012] mba hanaovana fihaonana, niteraka hasosorana sy hatezerana tamin'ireo mpikirakira aterineto nanerana ny tontolo Arabo.
Tsy nitsitsy teny ilay mpanentana avy amin'ny UAE , Sultan AlQassemi – namintina ny maha-tsy misy dikany ny fanambarànn'ny Ligy Arabo. Mibitsika am-panesoana izy:
@SultanAlQassemi: Fanavaozam-baovao mivantana avy amin'ny fivorian'ny Ligy Arabo momba ny herisetra ataon'i Israely ao Gaza: Tsy leferinay ny blah blah! Tsy maintsy izahay hijoro miaraka amin'ny blah blah bah.
@SultanAlQassemi: Tsy miantsy hatahotra i Israely – SekJen Ligy Arabo : Ho averinay hodinihana ny Drafi-Pilaminana Arabo tamin'ny 2002
Joseph Dana, Israeliana mpanao gazety, manamarika hoe :
@ibnezra: Valin-kafatra asetrin'i Israely an'ilay fihaonana maika ataon'ny Ligy Arabo ao Kairo ny tsy fanaovany fanambaràna sy fiaikena na inona na inona.
Mandritra izany, Josh Shahryar mivazivazy hoe :
@JShahryar: Nanao teny henjana ho an'i Israely ny Ligy Arabo. Nahemotra aloha ny fivoriana mandra-pamorona ireo teny henjana.
Ahmed Habib, Irakiana mpanao gazety, maneso hoe :
@ahmedhabib: Sahiran-tsaina ny mpahay siansa eran-tany amin'ny fahaiza-manao mihoatra ny takatr'olombelona #superhuman ananan'ireo mpikambana ao amin'ny Ligy #Arab hanehoany ny fahamatoran-dry zareo.
Ary Salem avy ao Tunis mampahatsiahy antsika hoe:
@salemfromtunis: Manana ny Rindrin'ny Fitomaniana ry zalahy, isika manana ny ligin'ny fitomaniana.